Tirada Dadka U Dhintay Caabuqa Ka Dilaacay Dalka China ee Corona Virus Oo Korodhay. |
Tirada Dadka U Dhintay Caabuqa Ka Dilaacay Dalka China ee Corona Virus Oo Korodhay.
Addisababa(GNN):-Mas’uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa sheegay in dad gaaraya 106 qof ay u dhinteen caabuqa corona, halka afar kun oo kalena uu haleelay xanuunka.
Dadka cudurka u dhintay ayaa waxaa kamid ah dhakhaatiir ku hawlanaa daweynta iyo kahortagga cudurka, waxaana dowladda ay sheegtay in nus milyan shaqaale caafimaad ah ay ka qeyb qaadanayaan dedaalada ku aadan caabuqa corona.
Dowladda Shiinaha ayaa sii xoojisay xayiraad dhanka socdaalka, si looga hortago faafidda cudurka.
Magaalada Wuhan oo ah halkii uu markii hore ka dilaacay caabuqan ayaa haatan go’donsan, waxaana la xiray dhammaan waddooyinka soo gala magaaladaas.
Waxaa sidoo kale sare u kacay dadka ku nool dalalka kale ee caalamka ee uu haleelay caabuqan, oo waxaa kiisas cusub laga soo sheegay dalalka Singapore iyo Jarmalka.
Guud ahaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka Shiinaha, waxaa la hakiyay gaadiidka dadweynaha, waxaana cudurkan uu dilaacay xilli dalka Shiinaha looga diyaar garoobayay dabaaldegga sanadka cusub, xilliyadaas oo dad badan ay aad u safraan.
Dowladda Shiinaha ayaa saddex cisho oo dheeraad ah ku dartay debaaldagga sanadka cusub, si dadkii ka baxay Wuhan aanay dib ugu soo laaban, taas oo yareyn karta kahortagga caabuqa corona.
Dowladda Mareykanka oo dalkeeda laga soo wariyay in lagu arkay hal kiis ah ayaa dalalka caalamka ku boorisay in ay ka fiirsadaan safarada lagu tegayo Shiinaha, gaar ahaan gobolka uu cudurkan ka dilaacay ee Hubei.
Sidoo kale dalal badan ayaa ka digay u safridda Shiinaha, halka wadamada qaarna ay isku dayayaan sidii ay uso samata-bixin lahaayeen muwaadiniintooda ku xaniban Hubei.
Ilaa iyo haddana ma jirto dad la sheegay in caabuqa corona ay ugu dhinteen dalalka kale ee caalamka.
Dedaalada ku aadan caabuqan ayaa waxaa kamid ah sidii loo hirgelin lahaa isbital u gaar ah dadka qaba caabuqa oo lagu daweyn karo.
Mas’uuliyiinta magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa isbitaal cusub ku dhisaya muddo lix maalmood gudahood ah, si loogu daweeyo bukaannada looga shaki qabo inay qaadeen cudurka coronavirus.
Sida ay tabisay warbaahinta dowladda, isbitaalka cusub ayaa ka koobnaan doona ilaa 1,000 sariir
Isbital lagu dhisayo 6 cisho
Muuqaal ay warbaahinta Shiinaha ku shaaciyeen internet-ka ayaa muujinaya baldoosarrada dhulka qoda oo durba sii billaabay shaqada dhismaha isbitaalka, oo ku fadhiisanaya dhul baaxaddiisu la egtahay 25,000 oo labajibbaaran.
Waxaa isbitaalkan loo ekeysiinayaa mid sanadkii 2003 laga dhisay magaalada caasimadda ah ee Beijing, xilligii uu dillaacay cudurka Sars-ka.
“Wuxuu noqonayaa isbitaal dadka xanuunka qaba lagu karantiili doono, qoysaskuna ay u soo diri doonaa xubnaha uu cudurka ka haleelay, waxaana halkaas laga heli doonaa qalabka badbaadada oo dhammeystiran”, sidaas waxaa yiri Joan Kaufman, ah macallin caafimaadka ka dhiga iskuulka Harvard.
“Shiinaha wuxuu taariikh u leedahay in mashaariicda noocan ah si dhakhso ah loo fuliyo”, ayuu yiri Yanzhong Huang, oo ahmacallin kale oo wax ka dhiga culuumta caafimaadka adduunka iyo xiriirka caalamiga ah.
Wuxuu tusaale ahaan usoo qaatay in isbitaalkii laga dhisay Beijing uu dhismihiisa ku idlaaday 7 maalmood gudahood, sidaas darteedna kooxda dhismaha wadda ay damacsan yihiin inay wakhtigii horay loo asteeyay uga dhakhso bataan.
Mr Huang ayaa sheegay in Injineerrada dhismahan ka qeyb qaadanaya laga kala keenayo guud ahaan qeybaha kala duwan ee waddanka Shiinaha, si dhismaha loogu soo afjaro waqtiga loo qabtay.